1.Gịnị bụ Testosterone phenylpropionate? Olee otu o si arụ ọrụ?
Testosterone bụ hormone nwoke nke na - eme n’ahụ mmadụ. Akwara na-ebuputa homonụ n’ime ụmụ nwoke. Homonụ a na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkwalite ọdịdị nwoke yana mmepe nwoke na nwanyị. Ihe odide ndị nwoke, dịka ụkpụkpụ akwara, akwara, ịmịpụta spam, na njikwa mmekọahụ, bụ ndị a na-akpali site na testosterone. Agbanyeghị, mmepụta testosterone na-agbadata dị ka otu afọ. N’aka nke ọzọ, testosterone bụ ọgwụ anabolic steroid nke a na-abanye n’ime ahụ iji nyere aka n’ịrụ akwara ma na-eme ka njiri mara nwoke ndị ọzọ. A na-adụkwa onye ọ bụla na-arịa ọkwa testosterone dị ala ume ka ọ were testosterone iji nyere aka mee ka mmepụta nke hormone ahụ dị n'ahụ pụta.
Testosterone phenylpropionate (1255-49-8) bụ steroid anabolic nke ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na nsonaazụ nke ọkwa testosterone dị ala. Enweghi testosterone zuru oke n’ahụ nwere ike ibute nsogbu ahụike dị iche iche dị ka libido dị ala, ọkwa ọbara dị ala, ma nwee ike igbu oge mmepe nke njirimara nwoke dịka olu miri, ajị agba, ma ọ bụ akwara n’oge uto. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọgwụ ga - enyere gị aka na ụlọ akwara yana imezu ebumnuche gị dị ka onye na - eme egwuregwu, mgbe ahụ testosterone phenylpropionate ga - abụ mgbakwunye kachasị mma. Steroid anabolic a na-anapụta nsonaazụ dị mma ma ọ bụrụhaala na ị na-eso ntuziaka ị doụ ọgwụ.
Dị ka ọ dị, ndị na-emepụta testosterone na-ejikọ ọgwụ ahụ na esters dị iche iche iji mee ka ha nwee ike ịnọsi ike na ahụ ogologo oge. Phenylpropionate bụ otu n'ime ihe ndị a na-ahụkarị na testosterone iji mee ka ndụ ọgwụ na-arụ ọrụ ruo ogologo oge ruo ihe dị ka ụbọchị 4 ruo ụbọchị 5. Ndị na-ahụ maka aru na ndị na-eme egwuregwu so na ndị ọrụ testosterone phenylpropionate kacha rụọ ọrụ n'ụwa. Ọgwụ na-enyere ha aka ịkwalite ike nke anụ ahụ, na-ewu akwara, ma na-emekwa ka ịkwa iko nwee ike. Agbanyeghị, dị ka mgbe ị na-eji steroid ndị ọzọ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịga mgbe nyocha ahụike tupu ịmalite ị thisụ ọgwụ a. Testosterone phenylpropionate eji ị nwere ike ịdị iche site n'otu onye gaa na nke ọzọ.
Kedu ka Testosterone phenylpropionate si arụ ọrụ?
Testosterone phenylpropionate (1255-49-8) dị ka ndị ọzọ anabolic steroid ọ na-akpali ahụ gị imepụta homonụ testosterone karịa. Ọgwụ a na - ahụ maka ahụ gị nwere oke zuru oke na nguzobe nke homonụ testosterone. Ozugbo ogo hormone nke nwoke a zuru oke na ahụ gị, ị ga-amalite na-enweta uru dị na ya, ị ga - enwe ike iru ihe mgbaru ọsọ gị ngwa ngwa. Homonụ ahụ na-ahụ maka ịkwalite oke abụba, ijigide akwara ma na - echebe gị pụọ na Osteoporosis.
Maka ndị na-ewu ụlọ ọ bụla, uru anụ ahụ na ike nke anụ ahụ dị oke mkpa maka ịrụ ọrụ nke ọma na ọzụzụ na asọmpi. Hormone nke testosterone na - enyere aka na mgbake anụ ahụ mgbe arụ ọrụ bukwara ibu karịa otú ahụ n'oge usoro bulking. Homonụ ndị a na-ejikọ Androgen Receptors (AR) iji mee ka abụba na-eto ibu ma mekwaa mmezi. Agbanyeghị, maka nsonaazụ testosterone phenylpropionate ka mma, ịkwesịrị isoro usoro na ọzụzụ kwesịrị ekwesị. Gwa onye na-azụ gị na onye na-edozi ahụ mgbe ị malitere ị startụ ọgwụ testosterone. Kpọtụrụ dọkịta gị ozugbo ị chọpụtara mmetụta ọ bụla dị njọ iji zere nsogbu ahụike ọzọ.
2.Mgbasa Testosterone phenylpropionate
Ekwesịrị ijikwa Testosterone phenylpropionate ihe dị ka izu 6 ruo 8, dabere na ihe ịchọrọ iji nweta site na njedebe nke okirikiri ahụ. Dọkịta gị ga-emekwa atụmatụ nke kachasị mma testosterone okirikiri phenylpropionate maka gị mgbe ị nyochachara ọnọdụ ahụike gị. Mgbe ụfọdụ, dọkịta nwere ike iwusi oge ị doụ ọgwụ ike ma ọ bụ belata ya. Inyocha ahụike mgbe niile ga-adị mkpa iji nyochaa usoro ọgwụ n’oge okirikiri. Enwere ike iji testosterone phenylpropionate naanị mee ihe n'oge okirikiri ma ọ bụ na steroid anabolic ndị ọzọ maka nsonaazụ ka mma. Agbanyeghị, ejikọtala ọgwụ ndị ahụ na enweghị ọgwụ gị.
A dụrụ ndị na-amalite ndụmọdụ ume ka ha jiri obere onyonyo na obere mkpụmkpụ malite, nke a ga-emezigharị mgbe emechara maka nsonaazụ ka mma. Ndị na - eme testosterone phenylpropionate dị elu nwere ike ịrapara na oge kachasị elu nke izu 8 ma ọ bụ karịa. Emebela ma ọ bụ mụbaa usoro testosterone phenylpropionate, ma ọ bụrụ na dọkịta enyeghị gị ndụmọdụ ka i mee ya. Mgbe ụfọdụ ọgwụ nwere ike ịkwụsị okirikiri ma ọ bụrụ na ị nwee mmetụta ọjọọ dị oke egwu nke nwere ike ibute nsogbu ahụike. Ahụ mmadụ na-eme ụdị dị iche iche na ọgwụ dịgasị iche iche; Yabụ, ọ bụghị akpaka na ọgwụ ahụ ga-arụrụ gị ọrụ dịka ịchọrọ.
3.Nsonaazụ testosterone phenylpropionate
Testosterone phenylpropionate (1255-49-8), mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, na-enye nsonaazụ dị mma ma emesịa nyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị. Yabụ, usoro nri, nri, na mgbatị ahụ ga-ekwe gị nkwa nsonaazụ kacha mma. Nke a bụ ụfọdụ nsonaazụ testosterone phenylpropionate nkịtị;
Uto olu, otu n’ime ihe kpatara ị ga - eji malite iwere Testosterone phenylpropionate dịka onye na - ewuli elu bụ n’ihi na ọ na - enyere aka ịkwalite uto nke akwara. Anụ ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ onye na-ewu ahụ ma mezuo na ịkwesịrị iji ọgwụ steroid ziri ezi iji kwalite mmepe nke akwara. Onye ọ bụla na-ewu ụlọ ma ọ bụ onye na-eme egwuregwu chọrọ inwe anụ ahụ na-eme ara, nke enwere ike ị nweta ya site na ị drugụ ọgwụ a.
Ọkụ na-egbu egbu, ịkpụcha okirikiri dịkwa mkpa ebe ọ bụ na ha na-enyere aka iwepụ abụba dị ukwuu n’ahụ. Testosterone phenylpropionate bụ mgbakwunye ike dị ukwuu ka ọ na-eme ka metabolism dị elu, nke na-eduga n'ọkụ ngwa ngwa. You nwere ike iji ọgwụ ahụ naanị ma ọ bụ ya na steroid anabolic ndị ọzọ ga - eme ka usoro abụba dị ọkụ.
Mgbake ngwa ngwa ma rụkwaa ya, arụ ọrụ nwere ike ịgbatị akwara gị ọtụtụ ugboro n'ihi ebuli ibu na mgbatị ahụ. Ihe mgbu ị na-enwe mgbe nke a gasị nwere ike igbochi ọzụzụ gị ma oge ụfọdụ nwere ike ime ka ọ siere gị ike ịga n'ihu na omume ahụ. Agbanyeghị, mgbe ị na - ewere testosterone phenylpropionate, nke ahụ kwesịrị ịbụ nke kacha nta na - echegbu gị ebe ọ bụ na ọgwụ ahụ na - eme ka usoro ọgwụgwọ ahụ dịkwuo mma. Ahụ gị ga-agwọ ngwa ngwa oge niile iji nye gị ohere ịrụ ọrụ kwa ụbọchị ma mee ka ọ dịrị gị mfe ịnweta nsonaazụ ịchọrọ.
Ọ na - eme ka ahụ dum dị ike, enweghị ume zuru oke iji rụọ ọrụ na ịsọ mpi nke ọma bụ oge niile nnukwu ihe ịma aka ọtụtụ ndị na - arụ ọrụ niile na - eche ihu n'ọrụ ha. Testosterone phenylpropionate ga - eme ka ọ̀tụ̀tụ̀ ike gị dị elu iji nyere gị aka ịzụ ogologo oge wee mezuo ebumnuche gị ngwa ngwa.
Ngme ka usoro ọkpụkpụ dị ike, osteoporosis bụ ihe ịma aka chere ọtụtụ mmadụ ihu, ọgwụ a na-enyekwa aka n'ịlụso ọrịa ọkpụkpụ ọgụ. Testosterone phenylpropionate ga-eme ka ahụ sie ike usoro ọkpụkpụ gị. Ruo ọtụtụ afọ ugbu a, ndị na-ahụ maka ọgwụ na-eji ọgwụ a enyere ndị ọrịa osteoporosis aka. Mmụta emere gosiri na testosterone phenylpropionate bụ otu n’ime ọgwụ kachasị ike maka ịlụ ọgụ ọnwụ nke njupụta nke ọkpụkpụ.
Meziwanye ihe banyere inwe mmekọahụ na agụụ; Ntọala testosterone dị elu ga-emeziwanye libido gị. N’aka nke ọzọ, agụụ ga-emekwa ka agụụ na-agụ gị. Yabụ, nke a na - eme testosterone phenylpropionate ngwaahịa dị mma maka ma ndị na - arụ ya na ndị na - alụ ọgụ dị ala. N’ime usoro ịtụgharị uche, agụụ ga-eme ka ọ kawanye mma ma mee ka ọ dịrị gị mfe ịnweta ebumnuche ndị ịchọrọ.
Nsonaazụ testosterone phenylpropionate
Dịka ọgwụ ọ bụla ọzọ, testosterone phenylpropionate (1255-49-8) nwekwara ihu ọma ya nke na-enwekarị ndị ọrụ na-eji ya eme ihe. Should kwesịrị ịdị na-agbaso ntuziaka maka usoro ị ifụ ọgwụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwelata mmetụta ndị a. Agbanyeghị, n'ihi ịdị mgbagwoju anya nke ahụ mmadụ, ụfọdụ mmadụ nwere ike ịnwe nsonaazụ ya ọbụlagodi mgbe ha theụchara ọgwụ nke ọma, mana ọgwụ nwere ike ijikwa nke ahụ. Effectsfọdụ n'ime mmetụta testosterone phenylpropionate na-ahụkarị gụnyere;
Ọgwụ nwere ike ibute nsị na rashes na ahụ gị
Nwere ike ibute nnukwu nsogbu
Nwekwara ike inweta ume ngba nke prostate
Nwere ike ime nkwọcha nye ụfọdụ ndị ọrụ
Na mgbakwunye, enwere ụfọdụ mmetụta ọghọm ị ga - enweta, nke na - apụ n'anya n'ime ụbọchị ole na ole. Ha gụnyere, itching na ọriaze n’akụkụ ebe ịgba ọgwụ mmiri, mana ọ bụrụ na ọ kara njọ karịa ka esi chee, dọkịta gị ga - enyere gị aka inweta ọgwụgwọ zuru oke. Ozi ọma ahụ bụ na enwere ike ijikwa ọtụtụ mmetụta Testosterone phenylpropionate ma ọ bụrụ na ị gwa dọkịta gị n'oge. Anọgide na-a theụ ọgwụ ahụ ma ọ bụrụ na ị na-enwe otu n'ime mmetụta ndị a dị n'elu na enweghị nkwado dọkịta gị. Mgbe ụfọdụ ọ nwere ike bụrụ ihe ịma aka ịgbanwe mmetụta dị njọ ma ọ bụrụ na ọgwụ amalite n'oge.
4.Testosterone phenylpropionate usoro onunu ogwu
Ssụ ọgwụ kwesịrị ekwesị na-emesi gị ike na nsonaazụ kacha mma ma n'oge kwesịrị ekwesị. Ndị a tụrụ aro testosterone phenylpropionate usoro onunu ogwu sitere na 100-200 mg nke kwesiri iwere otu ugboro kwa ụbọchị atọ. Maka ndị ọrụ ọhụụ, ọ dị mma ịmalite site na iji usoro onyonyo dị ala na usoro okirikiri mgbe ahụ enwere ike idozi ya na usoro ndị a. Ekwesịrị iji usoro onunu ogwu ahụ site na ntụtụ yana intramuscularly. Ọtụtụ mgbe, ịkwesịrị ị theụ ọgwụ ahụ maka ihe dị ka izu 6-8. Agbanyeghị, enwere ike ịgbanwe nke a dabere na ahụ gị si eme ihe na testosterone phenylpropionate. Dọkịta nwere ike dụọ gị ọdụ ka ịmalite site na obere usoro karịa nke 100mgs kwa ụbọchị 3, mgbe nyochachara ọnọdụ ahụike gị. A na-adụ ụmụ nwanyị ọdụ ka ha were usoro ọgwụ testosterone phenylpropionate dị ala iji zere ịmalite atụmatụ nwoke.
N’aka nke ozo, ndi aru aru ma obu ndi n’egwuregwu 200mgs n’ime ubochi 3 gabu uzo zuru oke iji mezuo ebumnuche ha. Maka nsonaazụ kachasị mma na-eso usoro gị na nri kwesịrị ekwesị na mgbatị ahụ ka ọ bụrụ na ịchọrọ iru akwara ma ọ bụ mgbe ị na-agbagharị. Enwere ike iji ọgwụ a n'akụkụ steroid anabolic ndị ọzọ, mana ọ na-enyekwa nsonaazụ dị mma mgbe ejiri naanị ya. Maka usoro bulking, ị nwere ike ịchekwa testosterone phenylpropionate na steroid ndị ọzọ mana sonye dọkịta gị iji nyere gị aka inweta ngwakọta kachasị mma. Ọzọkwa, cheta ịgbaso ntuziaka ịsụ ọgwụ ebe ọ bụ na ịsingụbiga mmanya ókè nwere ike ibute nsonaazụ dị oke njọ.
5.Testosterone phenylpropionate ọkara ndụ
Testosterone phenylpropionate nwere ndụ ọrụ ihe dịka ụbọchị 4 ruo ụbọchị 5 ozugbo agbanye ya na ahụ gị. Ya mere, ekwesịrị ị theụ ọgwụ ahụ otu ugboro n’ime ụbọchị atọ ọ bụla ma ọ bụ ugboro abụọ kwa izu iji nọgide na-enwe mmiri ọgwụ testosterone na-adịgide. Nke a na - eme testosterone phenylpropionate steroid anabolic zuru oke maka ọtụtụ bodybuilders n'ihi ndụ ogologo ya. Onwekwara oge zuru ezu maka mpaghara ntụtụ gị ka ọ gwọọ tupu ị were usoro ọgwụgwọ ọzọ. Cheta, testosterone na - akwalitekwa usoro ọgwụgwọ anụ ahụ, yabụ, ọgwụ a na - arụ ọrụ dịka mgbakwunye kachasị mma maka ndị na - eme egwuregwu ọ bụla ma ọ bụ na-ewu ụlọ.
6.Testosterone phenylpropionate maka ịkpụ
Testosterone phenylpropionate ntụ ntụ emee ezigbo mgbakwunye na ịkpụcha usoro. Inye nguzo nke testosterone a n’esepụ aka na-eme ka metabolism nke n’ikpeazụ nye aka n’ibelata abụba anụ ahụ. Dịka onye na-ewu ụlọ, ị ga-agafe ngere iji belata abụba anụ ahụ nke nwere ike igbochi gị iru ihe mgbaru ọsọ gị. A na-edobe abụba ahụ n'okpuru akpụkpọ ahụ ma nwee ike ime ka o siere gị ike ịzụlite ogo na akwara anụ ahụ. Ruo ọtụtụ afọ ugbu a, ọtụtụ puku ndị na-eme egwuregwu ejiriwo ya mee ihe maka ịkpụ ma na-eme mkpọtụ.
You nwere ike ijikọ testosterone phenylpropionate na steroid anabolic ndị ọzọ kachasị mma maka ịkpụgharị usoro dịka Winstrol, Anavar ma ọ bụ trenbolone maka nsonaazụ ka mma. Dabere na ọnọdụ gị ugbu a na ihe ịchọrọ iji nweta, ọgwụ gị ga - enyere gị aka inweta usoro ịhọrọ nke ọma iji nyere gị aka nweta akwara ka ị na - egbutu abụba ahụ na - achọghị. Iji mee ka ahụ gị dị mma dị ka onye na-eme egwuregwu ma ọ bụ onye na-ewu ụlọ, ị ga-eso Testosterone phenylpropionate stacking dosage na nri kwesịrị ekwesị yana mgbatị ahụ.
7.Testosterone phenylpropionate maka bulking
N'ebe a, naanị otu ebumnuche gị, nke bụ iji nweta oke olu n'ime ntakịrị obere oge enwere ike. Ndị na-ahụ maka ahụ na-amalitekarị site na usoro bulking, nke na-esochi usoro ịkpụcha. Ndị na-emega ahụ na-eme agadi na-agakwa usoro mmegharị ahụ oge niile iji nweta ma na-edozi ọkwa dị ike. Testosterone phenylpropionate bụ otu n'ime steroid anabolic na-ejikarị na usoro ngagharị. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị na-eme egwuregwu na-ahọrọ itinye ya ọgwụ ndị ọzọ iji mee ka nsonaazụ ya ọsọ. Ugbo elu na –eme ka arụ ọrụ dị arọ nke nwere ike ịgbatị akwara gị ruo n’ókè, ọ bụrụ na ịnweghị ezigbo mgbakwunye dị ka testosterone phenylpropionate, ị nwere ike inwe nnukwu ihe mgbu.
Steroid anabolic a na-akpali uto muscle ma na-emekwa ka usoro anụ ahụ dị ngwa. Ya mere, mgbe ị na-ewere nke gị testosterone phenylpropionate maka bulking, ị ga-ejide n’aka n ’uru uru ahụ bara ụba ma gbakee ngwa ngwa. Ọgwụ ahụ nwekwara ogologo ester, nke na-atụgharị na ndụ dị ogologo karị, yabụ na ị ga - agbanye ọgwụ ahụ ugboro abụọ n'izu. Yabụ, ikwe ka ebe ndị a ga-agba ya ka ọ gwọọ tupu ọ gaa usoro ọgwụgwọ ọzọ. Dọkịta gị, ọkachamara n’ihe banyere nri, na onye na-azụ gị kwesịrị iduzi gị n’usoro ngwụcha niile. Gbaa mbọ hụ na ha na-amata ebumnuche gị karịa otú ahụ mgbe ị na-amalite bullying ma ọ bụ na-egbutu usoro iji na-eduzi gị.
8.Uru Tesysterone phenylpropionate
Testosterone phenylpropionate na-enye ọtụtụ ndị ọrụ uru dị iche iche maka ndị na-eji ya n'ụzọ ziri ezi ma na-agbaso ntuziaka usoro usoro ọgwụgwọ. Dịka ọgwụ steeti anabolic ọ bụla, ị ga-agbaso ntuziaka ojiji nke onye na-emepụta testosterone phenylpropionate na ọgwụ gị ka ị nweta uru ndị a. Ọgwụ a egosila na ọ bara uru ma egwuregwu ma ọgwụ. Na-ele nyocha testosterone phenylpropionate dị iche iche, will ga-achọpụta na ọtụtụ ndị ọrụ na-enwe obi ụtọ ma na-ekwupụta afọ ojuju ha mgbe ha jiri steroid anabolic dị ike. Benefitsfọdụ n'ime uru testosterone phenylpropionate ama ama gụnyere:
Ihe niile I Kwesịrị Ịma Banyere Anavar (Oxandrolone) maka Bodybuilding(Na-abanye na ihe nchọgharị ọhụrụ)
Ndụ ogologo ndụ
Akụkụ kachasị mma nke iji testosterone phenylpropionate (1255-49-8) bụ na ị ga-achọ naanị iji ọgwụ gị ugboro abụọ n'izu. Nke ahụ na - eme steroid a anabolic ka ọ bụrụ otu n'ime ọgwụ ndị kachasị amasị ndị bodybuilders na ndị na - eme egwuregwu. Testosterone phenylpropionate na-anọ na-arụ ọrụ na ahụ gị ihe dị ka ụbọchị 4 ruo 5, nke na-enye mpaghara gị oge zuru oke iji gwọọ tupu ị takeụ ọgwụ ọzọ.
Na-anapụta nsonaazụ dị mma n'ime obere oge
Testosterone phenylpropionate bụ otu n’ime steroid anabolic na-eme ngwa ngwa n’ahịa taa. Will ga - ewere ọgwụ a naanị karịa izu 8, ị ga - enweta ihe mgbaru ọsọ gị ma ị na - eji ya maka ịkpụ ma ọ bụ na - eme mkpọtụ. Ọ bụ ezie na dọkịta gị nwere ike ịgbatị usoro ahụ dabere na ebumnuche gị ma ọ bụ ọganihu gị mgbe ị theụsịrị ọgwụ ahụ, ọ ka nwere otu n'ime usoro usoro mkpụmkpụ mkpụmkpụ ụwa nke anabolic steroid.
Na-eme ka arụmọrụ gị dịkwuo mma
Dịka onye na-eme egwuregwu ma ọ bụ onye na-ewu ụlọ, ịchọrọ ike na ume ahụ iji mezuo ebumnuche ọrụ gị. Testosterone phenylpropionate na-eme ka arụmọrụ gị dị elu ma ọzụzụ ma asọmpi. N’aka nke ọzọ, ọgwụ a na-arụ ọrụ dị mkpa n'inyere ndị na-eme egwuregwu na ndị na-ahụ maka ahụ aka ịkwụsị mgbu na ike ọgwụgwụ mgbe ha nwesịrị egwuregwu ma ọ bụ n'oge asọmpi. Shouldkwesịrị ịgba mbọ hụ na ịgbaso ntuziaka usoro usoro iji kwado nsonaazụ mma. Site na oge ị mezuru okirikiri testosterone phenylpropionate, ị nweela ike iji bulie gị asọmpi na ọzụzụ.
Ọgwụgwọ nsonaazụ niile testosterone
N'ime ụwa ọgwụ, ndị dọkịta na-eji testosterone phenylpropionate iji gwọọ ndị ọrịa nwere mmetụta testosterone dị ala dị ka obere mmekọrịta nwoke na nwanyị n'ime osteoporosis, n'etiti ọrịa ndị ọzọ. Testosterone dị ala, ọkachasị na ụmụ nwoke, na-abịa na nsogbu ahụike dị iche iche ka ejiri testosterone phenylpropionate na-agwọ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe akparamagwa nwoke na-egbu oge ịmalite itolite, nke a bụ otu n'ime ọgwụ kachasị ahọrọ site na ntụgharị uche.
Mmetụta dị obere
Ọ bụ ezie na steroid anabolic niile na-abịa na nsonaazụ dị iche iche, ị takingụ ọgwụ Testosterone phenylpropionate ga-ekpughe mmetụta dị oke njọ ma ọ bụrụ na ị were ya n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụ otu n’ime steroid anabolic ole na ole n’ahịa nwere ntakịrị mmetụta ọ bụla. Otutu mmetụta Testosterone phenylpropionate side na-eme naanị ndị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe. Ọ bụrụhaala na ị na-agbaso ntuziaka ịsụ ọgwụ niile, ị dị mma ịga, ị ga-anụkwa uru testosterone phenylpropionate niile..
9.Nyocha nke testosterone phenylpropionate
Ọtụtụ mgbe, ọtụtụ ndị ahịa na-ekwupụta echiche ha gbasara otu ngwaahịa site na nyocha na ogo. Dị ka ngwaahịa ọgwụ ndị ọzọ, testosterone phenylpropionate na-enweta nzaghachi dịgasị iche site n'aka ndị ọrụ dị iche iche. Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ afọ ojuju na nsonaazụ ọgwụ a na-eweta karịa na mba egwuregwu ebe ndị na-eme egwuregwu na ndị na-ahụ maka anụ ahụ na-eji ya enyere ha aka inweta ihe mgbaru ọsọ ọrụ ha. Maka ndị na-eme egwuregwu, ọgwụ ahụ enyerela ọtụtụ ndị aka inweta oke egwu n'oge oge egwu na -efekarị abụba ọkụ na-egbutu usoro.
N'ime ụwa ahụike, Testosterone phenylpropionate enwetala ọkwa dị mma na nyocha dị mma. Ndị ọrụ ọgwụ akọpụtala ihe ịga nke ọma nke ọgwụ a na ọgwụgwọ nke mmetụta testosterone dị ala karịkarịrị nwoke. Dịka anyị kwuru na mbụ n'isiokwu a, ọkwa testosterone dị ala nwere ike iduga n'okporo ụzọ dị ala, osteoporosis, na igbu oge nke njiri mara nwoke dịka ụda miri, ajị agba, n'etiti ndị ọzọ. Ọtụtụ puku ndị ọrịa na-etokwa testosterone phenylpropionate mgbe ọ gwọchara ọrịa nke ọma.
10 ama ama Anabolic Steroids Raw ntụ ntụ na 2019(Na-abanye na ihe nchọgharị ọhụrụ)
Ọzọkwa, ụfọdụ ndị ọrụ na-eme mkpesa banyere inwe ahụmịhe kachasị njọ na testosterone phenylpropionate. Agbanyeghị, ha ekwuola na ọgba aghara ha bụ ịdoụbiga ihe ókè ma ọ bụ mee ihe testosterone phenylpropionate. Ahụ mmadụ dị iche, ọ bụghị ọgwụ ọ bụla na-arụ ọrụ maka enyi gị ga-arụ ọrụ maka gị. Anyị na-adụ ndị ahịa anyị niile ọdụ ka ha gaa nyocha ahụike tupu ha amalite ịsụ ya. Ọ dị mma mgbe niile itinye aka dọkịta gị na usoro usoro onunu ogwu nke testosterone phenylpropionate maka ahụmịhe kachasị mma.
10.Testosterone phenylpropionate maka ọrịre
Enwere ọtụtụ ndị na-eweta testosterone phenylpropionate dị na ntanetị na ụlọ ahịa anụ ahụ gburugburu ụwa. Agbanyeghị, ịkwesịrị ịkpachara anya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị drugụ ọgwụ dị elu nke ga-ekwe gị nkwa nsonaazụ dị mma site na njedebe nke usoro gị. Ọ bụghị onye na-emepụta testosterone phenylpropionate ị hụrụ n'ịntanetị bụ ezigbo, ụfọdụ na-abịa ebe ahụ iji nweta ego, ha anaghị echekwa nsonaazụ ị ga-enweta mgbe ị takingụsịrị ọgwụ gị. N'ihu gị zụta testosterone phenylpropionate, buru ụzọ mee nnyocha gị. Gbalịsie ike ịghọta na onye na-eweta testosterone phenylpropionate na-arụ ọrụ tupu ịme iwu ọ bụla. Guo nyocha ndi ahia di iche na ileba anya nha ndi ulo oru.
Anyị bụ onye na - eweta testosterone phenylpropionate na - eweta ngwaahịa na onye nrụpụta na mpaghara. Weebụsaịtị anyị bụ ngwa ọrụ-enyi na enyi, yabụ ị nwere ike ịme iwu gị mfe iji ama ama gị, mbadamba ma ọ bụ desktọpụ gị site na nkasi obi nke ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị. Anyị na-agba mbọ mgbe niile na anyị na-ebunye ngwaahịa niile n'ime ntakịrị obere oge enwere ike. Ị nwere ike zụta testosterone phenylpropionate ntụ ntụ n'ọtụtụ ma ọ bụ naanị ezuru gị ma ọ bụ mebie usoro. Cheta, n’agbanyeghi otu ị nwere ike isi nweta ọgwụ ahụ, ebidola ị itụ ya n’enweghị ndụmọdụ dọkịta gị.
Na mgbakwunye, anyị na-adụ ndị ahịa anyị na-eguzosi ike n'ihe ọdụ ka ha ghọta ihe iwu dị na mba ha na-ekwu maka ịzụta ma ọ bụ ịnweta steroid anabolic ọ bụla tupu ha enye iwu n'elu ikpo okwu anyị. Anyị agaghị achọ itinye ndị ahịa anyị na nsogbu ndị mmanye iwu maka ịzụta ngwaahịa anyị dị mma. Kwenye na dọkịta gị ma enwere mgbochi ọ bụla mgbe ịzụrụ testosterone phenylpropionate bodybuilding. I nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị oge ọ bụla ịchọrọ ịtụ iwu ma ọ bụ mgbe ị nwere nchegbu ma ọ bụ ajụjụ banyere ngwaahịa anyị. Ndị nnọchi anya oche oche enyemaka anyị dị njikere mgbe niile ijere gị ozi.
11.Testosterone phenylpropionate vs Testosterone propionate maka ahụzi arụ
Enweghị ọdịiche dị egwu n'etiti ọgwụ abụọ ahụ ebe ọ bụ na ha na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ. Ha niile bụ steroid anabolic, ha na-ekerịta otu ọkara ndụ ihe dị ka ụbọchị 4 ruo ụbọchị 5. Nwere ike ịhọrọ iwere nke abụọ ma nweta otu ihe ahụ. Ndị bodybuilders na-eji ma testosterone phenylpropionate na testosterone propionate iji nyere ha aka na-ewu akwara. Ọgwụ ndị ahụ na - eme ka ogosi nke testosterone dị n’ahụ mmadụ, nke na - arụpụta ọmarịcha njiri mmekọahụ, uto nke akwara, na ịkpụ abụba anụ ahụ. Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-ejikwa ọgwụ abụọ ahụ iji bulie ọrụ ha ebe ọ bụ na ha na-eme ka ahụ ha dum na-eme ka ha nwee ike ịsọ mpi nke ọma.
Testosterone phenylpropionate na testosterone propionate naanị na-arụ ọrụ na kemịkalụ ha, mana ha na-ekerịta ọtụtụ atụmatụ. O kwesiri ka a beụọ maka steroid anabolic abụọ ugboro abụọ n’izu. Agbanyeghị, kpọtụrụ dọkịta gị banyere ọgwụ ị ga-eji ọnụ ya abụọ maka nsonaazụ kacha mma. Ọ gaghị enwe isi ọ bụla iji ha abụọ Testosterone phenylpropionate na testosterone propionate n'ime otu usoro ahụ. Ijide otu mgbe ga-aba uru karie, ma gwaa dọkịta gị oge niile. Nwere ike ịzụta ma anabolic steroid na weebụsaịtị anyị.
El Osta, R., Almont, T., Diligent, C., Hubert, N., Eschwège, P., & Hubert, J. (2016). Anabolic steroids abuse na nwoke infertility. Nhazi na usoro ọgwụgwọ, 26(1), 2.
Tretzel, L., Thomas, A., Geyer, H., Gmeiner, G., Forsdahl, G., Pop, V.,… & Thevis, M. (2014). Ojiji nke ọbara gbara agba na nyocha nyocha nke ọgwụ estabol estroid. Nyocha nke ọgwụ na ọgwụ biomedical, 96, 21-30.
Bhawani, SA, Sulaiman, O., Hashim, R., & Ibrahim, MN (2010). Nyocha nke chromatographic nke oyi akwa nke steroid: Nyocha. Akwụkwọ akụkọ nke Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 9(3).
Solimini, R., Rotolo, MC, Mastrobattista, L., Mortali, C., Minutillo, A., Pichini, S.,… & Palmi, I. (2017). Hepatotoxicity metụtara iji ọgwụ steroid anabolic androgenic na doping. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 21(1 Suppl), 7-16.